Teknolojia sy famokarana - AngelBiss Healthcare Inc.
Anaran'ny modely ho an'ny fampiasana: fonosana amin'ny tavoahangy mando
Isa patanty: ZL201921409624.3 Daty fanambarana momba ny fanomezan-dàlana: 23 Jona 2020
Anaran'ny modely ho an'ny fampiasana: mpangalatra ho an'ny concentrator oxygen
Anaran'ny endrika: fitaovana fitsentsenana herinaratra
Isa patanty: ZL201730552466.7 Daty fanambarana momba ny fanomezan-dàlana: 29 Jona 2018
Anaran'ny modely ho an'ny fampiasana: rafitra adsorption mifangaro ao amin'ny concentré oxygen oxygen sieve
Isa patanty: ZL201320711652.7 Daty fanambarana momba ny fanomezan-dàlana: 18 Jona 2014
Anaran'ny modely ho an'ny fampiasana: rafitra firakotra ambany momba ny rafitra adsorption
Isa patanty: ZL201320515904.9 Daty fanaovana fanambarana momba ny fanomezan-dàlana: 26 Febroary 2014
Anaran'ny modely ho an'ny fampiasana: Rafitra fandrakofana farany mifangaro ho an'ny tilikambo adsorption
Isa patanty: ZL201320548682.0 Daty fanaovana fanambarana momba ny fanomezan-dàlana: 12 Febroary 2014
Ny fampiharana patanty mahomby koa dia mamporisika antsika hanome vokatra avo lenta ary hitondra fahasalamana sy fahasambarana ho an'ny mpanjifa maro.
AngelBiss dia manana tsipika fivoriambe samihafa ho an'ny vokatra maodely samihafa miaraka amin'ny rafitra fiasa mahazatra. Alohan'ny hamokarana, ny fitaovana rehetra dia nojerena mafy sy nofidian'ny IQC. Ary mandritra ny fivoriambe, ny fizotry ny fivoriambe rehetra dia zahana mafy, ary ny kalitaon'ny vokatra dia voasedra mafy ihany koa amin'ny sampana fanaraha-maso kalitao. Ireo mpandraharaha dia miasa mafy araka ny fomba fiasa mahazatra. Ny fizotry ny famokarana rehetra dia mifanaraka amin'ny antontan-taratasy iraisam-pirenena ISO.